लट्टे खाने है !- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
लट्टे खाने है !
‘यसपालिको तीजमा लट्टे खाने है, बज्यै ! लट्टे खाने है !!’
बज्यै : हुन्छ नानी, बोराको डोरा फुकाउँछु
मान्द्रो झिक्छु अनदीको धान सुकाउँछु
‘यसपालिको तीजमा लट्टे खाने है,
आमा ! लट्टे खाने है !!’
आमा : हुन्छ नानी, बिहान चाँडै उठेर
मिलमा जान्छु, आउँछु धान कुटेर
काकी ! लट्टे खाने है !!’
काकी : हुन्छ नानी, नाङ्लामा चामल खन्याउँछु
निफन्छु र भिजाउँछु मीठो बनाउँछु
फुपू ! लट्टे खाने है !!’
फुपू : हुन्छ नानी, पकाउँछु सबलाई पु‍र्‍याउँछु
घ्यू तताउँछु, अदुवा र मेथी फुर्‍याउँछु
माइजू ! लट्टे खाने है !!’
माइजू : हुन्छ नानी, कसौंडीमा चामल हाल्छु म
पानी छम्की पनियाले भुट्न थाल्छु म
दिज्यै ! लट्टे खाने है !!’
दिदी : हुन्छ नानी, बेसार र चिनी राख्छु है
मीठो भयो भएन थोरै चाख्छु है !
हामी ! लट्टे खाने है !!’
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ११:२९
बाबुनानीहरू १ नचिनेको मान्छेले तिमीहरूलाई मिठाई, गुडिया दिन खोज्यो भने याद गर्नु है  । शरीर छुन, गालामा म्वाइँ खान वा दाह्री दल्न खोज्यो भने नाइँ भन्नु नि  ।
आन्विका गिरीले यस्तै सुझाव लेख्नुभएको छ– आफ्नो कथा पुस्तक ‘सानीका ज्ञानी कुरा’ मा । यो कथामा बाल यौन दुर्व्यवहारबारे लेखिएको छ । कथाकार गिरीका चारवटा बाल पुस्तक बजारमा आएका छन् । यी किताबमा तिमीहरूलाई मन पर्ने रंगीन चित्र, कथा, नाटक र कविता छन् ।
अर्को सचित्र बालकथा हो– ‘हाम्रो कुरा पनि सुन्नुस्’ । यसमा सातवटा बालमैत्री कथा छन् । विवाह, ब्रतवन्ध, पूजा आदिमा बालबालिकालाई पनि खान मिल्ने चिल्लो पिरोरहित परिकार बनाउनुपर्नेमा आवाज उठाइएको छ । बालबालिकाको पनि कुरा सुन्नुपर्ने, कुनै पनि चिज बनाउँदा उनीहरूले भेट्छन् कि भेट्दैनन् सोचेर निर्माण गर्न लेखक कथामार्फत् आग्रह गर्छिन् । जस्तै ः किताब राख्ने दराज, डेस्क बेन्च, धाराको टुटी आदि ।
‘ठूलो मान्छे कसरी बन्ने ?’ राम्राराम्रा चित्र समेटिएको बालनाटक हो । अनुशासित भएर बाँच्नु नै जिन्दगीको आधार हो । अरूका पनि कुरा सुन्दा, समस्या परेको बेला सहयोग गर्दा, सबैलाई माया गर्दा ठूलो मान्छे बन्न सकिने रहेछ । किताब पढेर तिमीहरू पनि यस्तै कुरा सिक है ।
‘आमाले सक्नुहुन्छ ?’ पुस्तकमा आमाको महत्त्वबारे लेखिएको छ । अवसर पाएमा आमाहरूले पनि काम गरेर छोराछोरीको पढाइका लागि आर्थिक जोहो गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश यो किताबभित्रका कथाले दिने छन् । पारिवारिक मेलमिलापको महत्त्व पनि बुझाइएको छ । गिरीका यी चारै पुस्तक सांग्रिला बुक्सले प्रकाशित गरेको हो ।
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ११:२८